Soosaarayaasha & Soosaarayaasha Mashiinka Casiirka Miraha - Shiinaha Warshad Mashiinka Casiirka Casiirka
Cabitaanka Kaarboonka leh iyo Mashiinka soosaarida cabitaanka soodhaha waxaa loola jeedaa cabitaanka ay ka buuxdo kaarboon laba ogsaydhka xaaladaha qaarkood.
qulqulka mashiinka soosaarida biyaha nadiifka ah: Biyo ceeriin tank haanta biyaha ceeriin pump bamka xoojiya filter quartz sand filter filter filter kaarboonka firfircoon ion jilciyaha filter filter sax ah → osmosis → ozone sterilizer tank haan biyo saafi ah pump biyo saafi ah → dhalada, buuxinta iyo goynta qadka buuxinta → gaarsiinta → laambad
Nidaamka ugu muhiimsan ee mashiinka cuntada qasacadaysan iyo khadka wax soo saarka: Xulista alaabta ceeriin treatment Daaweyn ka hor ning Canning → Qashin qufulka → Madhalaysnimada iyo qaboojinta
Miraha iyo khudaarta qalajinta iyo xirxirida dhamaan qalabka ceyriinka: miraha cusub iyo vegeetabels, sida yaanyada, chili, basasha, cambe, cananaaska, guavas, mooska,
Yoogurt waa nooc ka mid ah cabitaanka caanaha oo leh dhadhan macaan iyo dhanaan. Waa nooc ka mid ah wax soo saarka caanaha oo u qaata caano sidii wax ceeriin ah, oo la kariyey ka dibna lagu daro bakteeriyado waxtar leh (bilow) caanaha.
Cabitaanka casiirka miraha waa nooc ka mid ah cabitaanka laga sameeyo miraha cusub. Casiirka miraha kala duwan wuxuu ka koobanyahay fiitamiino iyo nafaqooyin kale, waxaana loo arkaa inuu yahay cabitaan caafimaad qaba. Si kastaba ha noqotee, la'aanta dhammaan faybarka iyo sonkorta sare ee miraha ayaa mararka qaarkood loo arkaa inay yihiin faa'iido daro.